Xaflad Lagu Furaayay Maalmaha Talaalka Caruurta iyo Haweenka Oo Lagu Qabtay Bosaaso(Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xaflad Lagu Furaayay Maalmaha Talaalka Caruurta iyo Haweenka Oo Lagu Qabtay Bosaaso(Sawiro)
Munaasabad lagu furaayay maalmaha talaalka Caruurta iyo Haweenka ayaa lagu qabtay magaalada Bosaaso gaar ahaan Xarunta Machadka Caafimaadka.
Waxaa kasoo qaybgalay masuuliyin ka tirsan Xukuumada Puntland oo ugu soo horeeyey Wasiirka dekaddaha iyo gaadiidka Badda Siciid Maxamed Raage,Duqa magaalada Bosaaso Maxamuud Faarax Beeldaaje,Kuxigeenka isuduwaha Wasaarada Caafimaadka ee gobolka Siciid Maxamed Waraabe iyo martisharaf kale.
Kuxigeenka Isuduwaha Wasaarada Caafimaadka ee gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in muhiimad weyn ay tahay in laga faa’ideysto maalmaha talaalka,isagoo ugu baaqay Bulshada ku dhaqan degaanada Puntland gaar ahaan gobolka Bari in ay fursadaan si fiican uga faa’ideystaan.
Saraakil ka kala socotay Hay’adda UNICEF iyo WHO oo qaabilsan Caafimaadka addunka ee Qaramada Midoobay ayaa halkaas ka sheegeen in talaalka ay dan weyn ugu jirto ubadka soo koraaya,waxaana ay ugu baaqeen Haweenka siiba Hooyooyinka in ay caruurtooda talaalan maadama u cunuga ka difaacayo cuduro badan oo dilaa ah.
Duqa magaalada Bosaaso Maxamuud Faarax Beeldaaje ayaa mahadcelin gaar ah ujeediyey cidii fududaysay talaalkaan oo u sheegay in aan meel fog ah laga doonanaynin balse dadka guryaha loogu tegaayo.
Wasiirka dekaddaha iyo gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa soo xiray munaasabada,wuxuuna soo jeediyey baaq ku aadan in talaalkaan uu yahay mid anfac u ah Hooyada iyo Cunuga oo laga doonaayo in ay ka faa’ideystaan.
Wasiirka ayaa intaa ka dib labadii dhibic ee ugu horeysay goobta ku siiyey cunugii ugu horeeyey.
Maalmaha talaalka Caruurta iyo Haweenka ayaa waxaa si rasmi ah uga bilaabmay degaanada Puntland.